बाबाले आँखा देख्नु हुन्न , घरमा खानेकुरा छैन् , आमाको कि’रिया बसेका ९ वर्षिय नाबालकको यस्तो अवस्था ! « गोर्खाली खबर डटकम
इच्छा तपाईकोः छोरा जन्माउने की छोरी ? यस्तो छ १०० % काम गर्ने चाइनिज सुत्र
विश्वकै सवै भन्दा लामो कपाल भएकी केटी जसले १२ वर्ष पछि कपाल कटाइन्, कारण के त?
वलिउडका स्टार किड्स् अभिनेता अभिषेक वच्चन मध्यम वर्गिए साधारण जिन्दगीमा हुर्किएका थिए !!!
गाईको गहुँत जीवन बुटी सावित, यी १४८ प्रकारका रोगबाट मुक्त हुनुहोस्
सावधान ‘पाइन्टको गोजीमा मोवाइल राख्दै हुनुहुन्छ भने बनाउनेछ नपुंशक !
गरिबलाई समाज वा मान्छेले समेत हेपेको देखेको र भोगेका छौ तर त्यो भन्दा बढि भगवानले नै गरिबलाई हेपिरहेको हुन्छ।एउटा त्यस्तै घटना तुलसीमा देखा परेको छ । आमा लो पेसरका कारण मृ त्यु , बाबाले आखा देख्नु हुन्न घरमा खाना खाने अन्न छैन्।
बाबाले आँखा देख्नु हुन्न आमा मरी जानू भो ।आमाको किरिया बसेको छु घरमा खाने चामल छैन । यस्तो हारगुहार गर्नेमा ९ वर्षिय नाबालक हुन सुमन विक ।उनको तुलसिपुर ३ राम्री भन्ने ठाउमा खरले छाएको झुपडी छ । सुमन विकका आमाको माघ २१ गते लो प्रेसरका कारण मृत्यु भएको थियो ।
बाउ जोख बहादुर विकले आँखा देख्दैनन।सुमनले भनेका छन् रे जसले सहयोग गर्न चाहनु हुन्छ त्यो हिसाब लेखेर राख्नुस म ठूलो भए पछी कमाएर फिर्ता गर्छु ।अहिले उनलाई सबै भन्दा ठूलो चिन्ता आमाको कि’रिया बाट उत्रीने खर्च पनि छैन कसरी उम्कने होला ?
अपहरणको १२ घण्टा पछि ७ वर्षका नावालक भेटिए, अपहरणको कारण थाहा पाउँदा प्रहरी हैरान !!
जसको श’ब दुवै खुट्टा बा’धेर गा’डिएको अबस्थामा भेटियो !
काठमाडौमा आँधीहुरी । बाहिर ननिस्कन आग्रह
नयाँ दिल्लीमा ज्ञानेन्द्रको ‘हाइप्रोफाइल’ राजनीतिक भेट हुने! कसले मिलायो चाँजोपाँजो?
धेरै धनसम्पति कमाउने चाहाना छ ? धनसम्पति बढाउन पर्समा यी ५ चमत्कारी चीज राख्नुहोस्
घरमा किरा आइरहन्थे, खनेर हेर्दा उड्यो सबैको होस, भेटिए यस्ताचिज तुरुन्तै पुलिसले गर्नुपर्यो हस्तक्षेप
स्कुलको अगाडी दिनदहाडै अश्लिल कार्य गर्नेहरु पक्राउ